Zon'olombelona · Jolay, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Zon'olombelona · Jolay, 2017
Tantara mikasika ny Zon'olombelona tamin'ny Jolay, 2017
Fiampitana Arabe Miloko Avana Ao El Salvador Mampiroborobo Ny Fiarovana Ny Mpandeha An-tongotra Sy Ny Zon'ny LGBTQ
Amerika Latina 31 Jolay 2017
Manantena ny hitarika ny dingana mankany amin'ny tontolo ara-drariny kokoa ho an'ny vondrom-piarahamonina LGBTQ ny "fiampitana arabe miloko avana" ao Amerika Afovoany.
Kurdistance… [Fijoroana Kiorda]
Nitranga tamiko ny zavatra tena mahatsiravina indrindra....ny fifamoivoizam-baovao RSS ho an'ny bilaogy Kiorda, nanjavona avokoa ny vaovao rehetra. Ka amin'ny fiatrehana ny olana, dia hamela olona vitsy ny lahatsoratra androany. Soa fa tsy very ny asako rehetra satria mbola azo jerena ao amin'ny tranonkala bilaogiko ny vaovao RSS rehetra.
Maldiva: Voampanga Ho Nampijaly Sy Namono Ho Faty Tovolahy Iray Ny Polisy
Maldiva 26 Jolay 2017
Miteny ho azy indray ny fampijaliana ao amin'ny fonjan'i Maldiva noho ny fahitàna vatana mangatsiaka tao anaty rano ary feno diana kapoka feno herisetra, tao Malé renivohitra ny marainan'ny 15 Aprily. Nogadrain'ny polisy andro vitsy talohan'ny nahafatesany ity tovolahy antsoina hoe Hussain Solah ity.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 25 Jolay 2017